ဂဇက်ရွာသူ/သားများ ဟင်းချက်ပွဲကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂဇက်ရွာသူ/သားများ ဟင်းချက်ပွဲကြီး
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Mar 22, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Ideas & Plans, Myanmar Gazette | 54 comments
ဒါက ဒီလိုရှိပါတယ် ခင်ည ……။
ဒီ မတ်လကုန်ပေါ့ ဧပြီလဆန်း (၁)မှ (၅)ရက်ကြား တနေ့နေ့ပေါ့ဗျာ။ မန်းဂဇက်က ရွာသူ/သားတွေ စုပေါင်းပီး ဟင်းချက်ပွဲ လုပ်မလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ ……..
ဟောင်ကောင်က ဇနီးမောင်နှံ(ကျော့်ကို ဖေ့ဘွတ်မှာ အစားနဲ့ ဒုက္ခပေးတဲ့ ၂ယောက်) လည်းပြန်ရောက်မှာမို့ လူစုံမယ် ထင်သဗျာ။
တက်တူးဆြာမင်းသုဝေ(သူ့ယောက်ဖက စားဖိုမှူး) တို့လည်း အားမယ်ထင်တော့ အားဖြည့်စေချင်တယ်။
နေရာကိုတော့ ကျနော့် မှော်ဘီခြံ/ သူငယ်ချင်းရဲ့ ၇မိုင်ခြံ/ ဒါမှ မဟုတ် တနေရာရာပေါ့ဗျာ။ ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ အိုးခွက်၊ပန်းကန်ကတော့ ကျနော့်တာဝန်ထား အဆင်ပြေရင် ဒီပွဲလုပ်ဖြစ်ရင် 5PLus Channel က ကျော့်ဘော်ဒါတွေက လာကူညီမယ်တဲ့။ သင်္ကြန်ပီးရင် လွှင့်ပေးမယ်တဲ့။ သူရို့နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဆုတွေ ဘာတွေ ပါမလားမသိ။ ကျနော်ကတော့ City Martက ၁သိန်းတန်/၅သောင်းတန် အခမဲ့ ဈေးဝယ်ခွင့်ကဒ် မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးချင်ရဲ့ဗျာ။
အစီအစဉ်ကို လာတဲ့သူတွေ ၀ိုင်းဗုတ်တဲ့ စနစ်ပေါ့။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သင်္ကြန်မှာ အမှတ်တရ မိသားစုလိုက် စုံစေချင်တာပါ။
ကျန်တဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ရွာသူ/သားများ ထပ်ဆင့် ဆွေးနွှေးကြပါကုန် ……….။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်မို့ လက်မလွှတ်စတမ်း ပါဝင်ချင်ပါတယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါးဖြစ်အောင် တစ်ယောက်တစ်မျိုး ကြိုက်ရာချက်မယ့်အစား အစားအစာတွေ လိုက်ဖက်အောင် ညှိနှိုင်းပြီး ကြိုတင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
သများ မရှက်တတ် အဲလေ ချက်တတ်ပါဘူ ဆို…!
သားသား ဘာချက်ပေးရမလဲ ?
သားက ( ၁၉၉၆ – ၂၀၀၀ ) ဆီဒိုးနား မိန်းကစ်ချင်းကနော့ ၊
5-4-2014 နေ့ မှာ ရန်ကုန် ဆင်းလာ ပြိး အ လှူ ငွေ တွေ စု ပါ မယ်
6-4-2014 နေ့ မှာ သွား ရောက်လှူ ဒါန်း ပါ မယ်
ကား ကူ ညီ ပေး နိုင် မည့် သူ များ နဲ့ လိုက် ပါ မည့် သူ များ ကျ နော် ကို ဆက် သွယ် စေ လို ပါ တယ်။
( လူ အ၀င် များ မယ့် ပိုစ် မှာ ၀င် ကြော် ညာ ပေး ခြင်း )
ဆလွန်းဆိုရင် ၂ယောက်-၃ယောက်၊ ပစ်ကပ်ဆိုရင် လူ ၁၀ယောက်လောက်လိုက်နိုင်မယ်။
ကိုပေါက်ရေ အလှူငွေတစ်သောင်းကျပ်နဲ့ probox ကားတစ်စီးကူညီပါမယ်။
လူတကိုယ် အကြိုက်တမျိုးမို့ ကျော်ကတော့ ဘာမှမပြောလို၊ ကုလားစာ၊ တရုတ်စာ၊ ဗမာစာ၊ တိုင်းရင်းသားအစားအစာ တယောက်တမျိုးချက်တော့ စားရတဲ့သူတွေ အမျိုးစုံ မြည်းစမ်းရသပေါ့။
အက်ပတူဒိတ် အွန်လိုင်းကနေ ပို့ပေးပါ့မယ် အကြံပေးပေါ့
မြည်းလည်းမြည်း မီးလည်းထိုးပေါ့ ဟိဟိ
အက်စ် ယူလိုက် အက်စ်ယူ ဝှခ်ျ့၊ ယူ ကန်ဒူး ဆမ်းမ်းဝန်းမ်
တစ်နေ့ အစားအသောက် ၅ နပ်စာ ၁ ပတ်လောက်ရယ် (သများ တစ်ခါစားရင် ဘယ်လောက်စားလည်း သိတယ်မို့လား)
ဟိုနားဒီနားသွားဖို့ အဲယားကွန်းကောင်းကောင်း စလွန်းလေးရယ် (ဘာကား ညာကား လို့ မပြောဘူးနော်)
ဒရိုင်ဘာ ချောချောလေးရယ် (တော်ကြာ ကဖက်ကက်ကြီးချောဆွဲလာမှာစိုးလို့)
လှည့်မကြည့်စတမ်း သုံးဖို့ ပိုက်ဆံ အထပ်လိုက်ရယ် (တစ်သောင်းတန် အထပ်လိုက်မှ)
တီဗီရိုက်မှာဆိုရင် ပွဲနေ့ကို ဝတ်ဖို့ ဝတ်စုံရယ်
အဲ ! ဆုရရင် ဆုယူတဲ့ အချိန်ဝတ်ဖို့ ဝတ်စုံရော နော်။
အာ့တွေ စီစဉ်ပေးမယ် ဝယ်ပေးမယ် ဆို ယွဲ စီစဉ်တဲ့ ပွဲ လာ နွှဲမယ်။
လေးပေါက်နဲ့ ကိုခကိုပါ အိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ဆွဲစိမှာ ကပေနဲ့ ကိုဖိုးထောင်က ၄ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ ရှိမယ် ဆိုလားပဲ
ဖြစ်နိုင်ရင် အသည်းထောင်း လေးလုပ်ကျွေးချင်တယ်။ နောက် ရေခင်း မုန့်ဟင်းခါး…လေးလည်းကျွေးချင်တယ်။ ၇မိုင်ခြံကပိုနီးမလားလို့..။
ဟာဂျာ ဟာဂျာ….အဲ့ရက် လုံးဝ မအားလို့ဂျာ ၀င်နွဲလိုက်ချင်တယ်…
ဆုရရ မရရ ၀င်ပြိုင်ပါမယ်။ ရန်ကုန်ထဲမှာကျင်းပစေချင်ပါတယ်။ မှော်ဘီဆိုရင်တော့ လာဖို့မလွယ်လို့ပါ။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးချက်ရမှာလဲ။ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား။
အယ်. . .
လိုက်ဖက်တာ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီး ချက်စေချင်တယ်ဆိုတာ….
ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ လက်ရာကို ပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ အ၀စားပြီး အချိုတည်းနိုင်အောင် သီးစုံနို့အေးဖျော်ရည် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားလို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ် အခြားအဆင်ပြေတဲ့ လေးဇီးကွတ်တစ်ခုခု ဆိုလည်း ရတယ်။
ဒွတ်ခပဲ… အစားဆိုတာနဲ့ မရိုးမရွဖြစ်ချင်နေပြီ
ဆိုးတာက နောက်လ 4,5,6 ကို ရုံးရွှေ့မယ်ဆိုတော့ ခွင့်ယူလို့မရတဲ့အပြင် အိုဗာတိုင်ပါဆင်းရဦးမယ်
ကြည့်ရတာ နှစ်ပွဲလုံး လွတ်ဖို့က ရာနှုန်းအတော်များနေတယ်။
သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ ခင်ဗျ။
ချက်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် ဂက်စ်မီးဖို ၃လုံးထားပေးပါ့မယ်။ အသီးအရွက် သားငါး စုံအောင်ထားပေးပါ့မယ်။
သီးသန့်ဟင်းလျာဆိုရင်တော့ ကိုဟွာကို ဝယ်လာပေးကြပါ။ ဥပမာ။ ။ငါးမန်းတောင် ဟင်းချိုလို ဟာမျိုးပေါ့
မှော်ဘီက ငရဲဗြဲလျှမ်းခြံက နည်းနည်းဝေးတာမို့ ၇မိုင်/တခြားနီးတဲ့နေရာ စီစဉ်ပေးပါ့မယ်ဗျ
နောက်တွေ့ဆုံပွဲတွေကျရင် အကုန်အကျစရိပ်သက်သာအောင် ရွာထဲမှ easy cook များအား အကူအညီတောင်းသင့်ပါကြောင်း။
ဟိုတလောက ဟော်တယ်မှာ အာလူးချောင်းချဉ်စပ်မှာစားတာတွေ့တော့ ဝေေ၀ရဲ့အာလူးချောင်းချဉ်စပ်ကို သွားသတိရတယ်။
Easy Cook တွေရဲ့စာတွေ့တွေကို လက်တွေ့မြည်းရတော့မယ်။ အားလဲနာတယ် ခင်လဲခင်တယ်။ အဟီးးးးး။
Easy cook – Wei
Lazy cook – Ma Ma
Busy cook – Kyauk
Eco Cook – Aunty Don
Chef cook – TNA
Homey cook – Mwa Ei
Heavy Cook – U Sur Mi
Duty Cook – U Myo Thant
Lousy Cook – KZ
Drunken Cook – Yee Xie
Duty Cook ….. အဲဒါ ဘာလဲ ဟင် ?
ဂျူတီ အရ ကွတ်ရတာကိုပြောတာလေ။
၆ရက် တနင်္ဂနွေ လုပ်ပါလား။
လေးပေါက် သီလရှင်ကျောင်းအလှူ စောစောလေး သွားလှူကြပြီး အပြန် စားတော်ချက်ပြိုင်ပွဲကြီး နွှဲကြရအောင်။
ဆရာလုပ် နှမ်းဖြူး ချင်လို့ပါ။
စားသောက်ဆိုင်လိုင်းမှာ လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြက်ကြော် ကြော်ကြွေးပြချင်ပါသေးတယ်
Yummy Cook – Ko Yin Sai
Fatty Cook – Ko Fat Cat
Sweety Cook – Ba Swe
Mighty Cook – Madam Mite
မတ် ၃၀ တနင်္ဂနွေ
ဧပြီ ၆ တနင်္ဂနွေ
ဧပြီ ၁၃ တနင်္ဂနွေ ရက်ရွေးကျပါကုန်
အားလုံးအားမှ အားလုံးစုံမှ ပျော်စရာကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
၆ရက်နေ့ ရွှေပြည်သာအလှူကအပြန်ဆို အချိန်တော့ နည်းနည်းကျပ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ အများအားမဲ့ရက်က အကောင်းဆုံးမို့ ညှိကျပါခင်ဗျ။
လာမဲ့ တနင်္ဂနွေလောက်ကို ကိုစွယ်တော်ရွက်ရဲ့ ရွာကွပ်ပစ်မှာ အသေးစိပ်ညှိနှိုင်းခြင်ပါတယ်ဗျ။
ဒီကိစ္စ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ရင် စီးတီးမတ်နဲ့ ဟင်းစားကိစ္စ ပြောရမှာမို့ပါ။
အနော်ကတော့ ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မချက်တတ်တော့ ချက်တဲ့သူတွေကို တောက်တိုမယ်ရ ကူပါမည်… (သတိ..ကြက်သွန်နီခွာရင် မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက်ကျသည်.)
ဒါပေမယ့် ရက်တွေက ညှိဖို့လွယ်မယ်မထင် …
၁၃ ရက်နေ့ကတော့ ခရီးသွားနေမှာမို့လို့ သေချာပေါက်မအားပါ ..
၆ ရက်နေ့က မနက်ပိုင်း ကိုပေါက်အလှူနဲ့ နေ့ခင်းပိုင်း မသွားမဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုရှိနေတယ် ..
ချစ် လှ စွာ သော ရွာသူ သား များ ခင် ဗျား
ကျ နော် တို့  သွား ရောက် ရ မယ့်  နေ ရာ က
ရွှေ ပြည် သာ
ထန်း ခြောက် ပင် ဈေး ရဲ့ အ နောက် ဖက်
မြို င် သီ လ ရှင် ကျောင်း အနီး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျ နော် က ရန် ကုန် မ ကျွမ်း ပါ။
အဲ တော့ ကျ နော် တို့ စု ရပ် လေး တစ် ခု ကို ၀ိုင်း စဉ်း စား ပြီး
ပြော ပေး ကြ စေ လို့ ပါတယ.် ခင် ဗျား
ကိုပေါက်အလှူကို ရွှေပြည်သာကျောင်းမှာ မနက် ၇နာရီ စပြီး ၈နာရီပြန်လာ ၇မိုင်မှာ ချက်ရေးပြုတ်ရေး စမည်ဆိုလျှင် ထမင်းစားချိန်တော့မီမည် ထင်ပါသည်။
ရွာကွပ်ပျစ်မှာ တနင်္ဂနွေ မနက်စောစော ဆုံမည်ဆိုလျှင် ကျောင်း တချိန်ပြေးပြီးလာပါမည်။
အလှူသွားဖို့ ရွာကွပ်ပျစ်မှာ မနက် ၆နာရီခွဲ စုပါလား ကိုပေါက်။
အကောင်းဆုံးစုရပ်က ကိုစွယ်တော်ရဲ့ “ရွာ့ကွပ်ပျစ်” ပါ..အချိန်ကတော့ အာတီဒုံပြောသလို ၆ခွဲပေါ့…
မတ် ၃၀ နဲ့ ဧပြီ ၆ ရက်ကတော့အားတယ်…
၂ ၊ ၃၊ ၄၊ ၅ က Workshop ရှိတယ်… မအားဘူး…
အားတဲ့နေ့ ဆိုရင်တော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ချက်ချင်ပါတယ်… ကွဲစည် အုန်းသီး (၂) လုံးလောက် ခြစ်ထား ညှစ်ထားဘာ
ဒုတိယမြောက် သွေးကျဆေးသောက်ပြီး လာစားမယ့်သူအဖြစ် စာရင်းပေးပါသည်။
အနော် အုံးတီးကိုင်ပီး အသင့်စောင့်နေပါသော်လည်း…
အစ်မသဲကလည်း ရေခဲသေတ္တာရမှ သူ့မုန့်ကရမှာ
ဆိုတော့ ဝိးတိုးဝါးတားရဲ့ အစီအစဉ်ကို မျက်လုံးမှာ မြင်နေပီ
ဒါပေသည့် ၅ရက် (သို့) ၆ရက်နေ့မှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်…
ချက်ကျွေးမယ်… ဘာစားချင်ကြတုန်း ပိတ်သတ်…
ကိုပေါက် အလှုကိုလည်းလိုက်ခဲ့မယ်… အဲ အတင်းမရှိခိုးခိုင်းရဘူးနော်…
တီဗွီမှာ လာလာနေတဲ့ ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲလိုမျိုးဆိုရင်တော့ ပါချင်ဘူးအေ…
ကုသိုလ်ဖြစ် ဈေးရောင်းပွဲ လိုမျိုးလေးလုပ်
ရလာသမျှ အရင်းအမြတ်(အမြတ်) အကုန်လှူ အဲ့လိုမျိုးလေးကော…
သယ်ပေးရတဲ့သူကရိကထမများအောင်… သေးပြီးလူတိုင်းသုံးနိုင်တာစဉ်းစားတော့.. ထုံးစံအတိုင်း SD Card တွေပဲတွေးရတာမို့..
လောလောဆယ်.. ၁၆ဂစ် ၃ခု ၀ယ်ထားပါကြောင်း..။
Total points attainable for all four courses is 400.
Menu/recipe composition/innovation/utilisation of meat cuts (0-10 points per course)
Points will be awarded for the maximum use of the meat cuts, creativity, recipe and menu compilation.
Mise en place and cleanliness during preparation (0-10 points per course)
Points awarded are based on the arrangement of materials for trouble-free working and service and for safe and hygienic work methods employed, during and after the completion of the event.
Correct professional preparation (0-20 points per course)
Points awarded based on the correct basic preparation of food, corresponding to today’s modern culinary art. Preparation should be practical, acceptable methods that exclude unnecessary ingredients. Appropriate cooking techniques must be applied for all ingredients, including starches and vegetables.
Arrangement and presentation (0-20 points per course)
Points awarded are based on clean arrangements, with no artificial garnishes and no time-consuming arrangements. Exemplary plating to ensure an appetising appearance.
Taste (0-40 points per course)
The typical taste of the food should be preserved. It must have appropriate taste and seasoning. In quality, flavour and colour, the dish should conform to today’s standards of nutritional values.
Teams must maximize the use of the ingredients provided by the sponsors. At the judge’s discretion,amaximum of 10 points per course can be deducted if, in their opinion, the use of other ingredients has been exaggerated. Teams are disqualified if they cannot produce the required number of portions.
Total points attainable 80.
Innovation (0-40 points)
Creative use of display materials. Unique presentations of centrepiece. Table decoration is in keeping with the general theme of the food being served.
Professional presentation (0-20 points)
Table is laid to exacting international standards of dining etiquette. Quality of napery, cutlery and accoutrement used.
Hygiene (0-20 points)
Material used is suitable for food service, cleanliness of linen and flat ware, glasses, etc.
ဒိုင် တွေ ဖတ်ဖို့။
အမယ်မင်း ၆ကျိုးနည်း လူမစုံတော့လို့ ဖေ့ဘွတ်ထဲ ရက်ရွှေ့ကြောင်း ကြေငြာပီး သကါလ ဒီထဲမယ် ဘိုဖြစ်ကျတာတုန်း???
သဂျီး စတစ်ကီ ဖြုတ်ပေးဦးဗျ ပြိုင်ပွဲက ၆ရက်နေ့ မဖြစ်ဘူးရယ် ……..
ရက်အတိအကျ ရအောင်ညှိနှိုင်းပါရဇီ :'(
ဇီဇီ ပြောတဲ့ တန်းလန်း ဆိုတာ ဒါလား ငင်င်င်။
ရွာနဲ့ ပြတ်တုန်း လွတ်သွားတဲ့ သတင်းဘဲ။
အဲ့ဒီ ပွဲ ဖြစ်ခဲ့လား။
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြတုန်း။ ပြောကြပါဦး။
ဖြတ်ဖောက်ချုပ် ဂိုဏ်းက ဇာတ်သိမ်းတယ်ရယ်။